Banky iraisam-pirenena : 75 tapitrisa dolara ho fanajariana an’Antananarivo | NewsMada
Banky iraisam-pirenena : 75 tapitrisa dolara ho fanajariana an’Antananarivo
Nankatoavin’ny Banky iraisam-pirenena (BM), omaly any Washington, ny famatsiam-bola 75 tapitrisa dolara avy amin’ny Association internationale de développement (Ida) ho fanatsarana ny fotodrafitrasa, fiatrehana ny loza ateraky ny andro ratsy, sy ireo asa hafa ataon’ny fanjakana, indrindra any amin’ireo fokontany betsaka mahantra eto Antananarivo Renivohitra.
Kendrena hahazo tombontsoa mivantana amin’ity tetikasa* ity ireo mponina 650.000 hita fa tena mahantra amin’ny faritra Antananarivo I sy IV sy any amin’ireo kaominina sasany manodidina, Anosizato Andrefana, Andranonahoatra, Bemasoandro Itaosy. Mponina roa tapitrisa fanampiny hahazo tombontsoa noho ny fanamboarana fotodrafitrasa hisorohana ny tondradrano sy fanatsarana ny fotodrafitrasa amin’ny tanàn-dehibe.
« Manome tombony ho an’ny mponina ny tetikasa manatsara ny toekarena amin’ny tanàn-dehibe. Olana misy ny fahantran’ny mponina sy ny tsy fitoviana be loatra, lasa sakana ho an’ny fampandrosoana maharitra. Koa manapa-kevitra ny Banky iraisam-pirenena hanamafy ny tetikasa eto Antananarivo, ho fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina », hoy ny solontenan’ny BM eto amintsika, i Coralie Gevers.
Iza ny tompon’andraikitra hanara-maso ?
Ampifandraisina amin’ny tetikasa « Lalankely » eto an-dRenivohitra sy amin’ny kaominina manodidina 27, vatsin’ny AFD sy ny UE, izao asa izao. Ankinina amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny fampitaovana ny fanatanterahana ny tetikasa. Manana anjara asa lehibe amin’izany koa ny kaominina, momba ny fampitomboana ny vola miditra sy ny fitantanana ao anatin’ny mangarahara. Iza kosa ny tompon’andraikitra hanara-maso ny asa, araka ny fenitra takina amin’izany fanajariana izany ?
« Tojo ny tondradrano hatrany ny lemaka Antananarivo ary mijaly ny mponina any amin’ny faritra iva sy ny manodidina. Tondradrano farany ny taona 2015, niantraika tamin’ny mponina 93.000 », hoy ny minisitry ny Fanajariana ny tany, Ramanantsoa Ramarcel Benjamina. « Koa ho fiarovana ireo mponina ireo izao tetikasa izao hahitan’izy ireo fiainana mendrika kokoa hialana amin’ny tondradrano isaky ny fahavaratra. Tetikasa hanome endrika tsara kokoa ny tanàn-dehibe, indrindra any amin’ireo faritra iva, hadino hatramin’izay », hoy ihany ny minisitra. Famatsiam-bola lehibe indrindra izao, ary anisan’ny asa goavana hatao ny fanamboarana lakandrano sy ny manamorona an’Ikopa.